ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြစ်မရှိကြောင်း ရုံးတော်မှာ ထွက်ဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ တားဆီးကန့်သတ်မိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေ ခံနေရတဲ့ တရားခွင်မှာ အပြစ်မရှိကြောင်း ကိုယ်တိုင် ခုခံချေပလိုက်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည် ၂စင်း ထပ်ပစ်လွှတ်
မင်းနိုင်သူ / ၂၆ မေ ၂၀၀၉
“ရဲမှူးချုပ်မြင့်သိန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ကို သက်ညှာသောအားဖြင့် တားဆီးမိန့် (၁၀/ခ) ကို ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုပြီး ဖတ်ပြတယ်။ တကယ်က ဒီတားဆီးမိန့် ရုပ်သိမ်းရမှာက ဒီလ (၁၄) ရက်နေ့ကတည်းက ....” အပြည့်အစုံသို့
အောင်ထက် / ၂၆ မေ ၂၀၀၉
“ကာတွန်းက အတော်လက်ရာမြောက်တယ်။ road map စာရွက်ကို ကိုင်ထားတာက
နအဖနဲ့ ပူးပေါင်းနေတယ် ဆိုတဲ့ ....” အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နောက် (၆) လ
အကျယ်ချုပ် သက်တမ်းတိုးနိုင်ဟု ရဲအရာရှိပြော
NEJ / ၂၆ မေ ၂၀၀၉
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည့် ဥပဒေများကို ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေ (၂၇) သက်တမ်းကုန်ပါက လည်း နောက်.... အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဆင်နွှဲရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မတရားအမှုဆင်ထောင်ချရန် ကြိုးပမ်းမှုအား မရပ်တန့်ပါက နအဖစစ်အုပ်စုသည် (ရှစ်လေးလုံး) လူထုအုံကြွမှုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးနှင့် မလွဲမသွေ .... အပြည့်အစုံသို့
ဘန်ကောက်ပို့စ်ပါ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တုံ့ပြန်ချက်
“ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက် တာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု မစ္စတာကဆစ်က အာရှ-ဥရောပ (အာဆမ်)အစည်းအဝေးကျင်းပနေသည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်မြို့မှ ပြောကြားလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ..အပြည့်အစုံသို့
၀ီရ / ၂၆ မေ ၂၀၀၉
“ဒီပထမပိုင်းမှာတော့ အခြေခံစစ်သင်တန်း ပေးမယ့်နေရာ ပေါ့။ အထက်နေပြည်တော်ရဲ့ ညွှန်ကြားမိန့်လို့ပဲ သိထားတယ်။ ဘယ်သူဦးစီးမယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူး။ ဒီစစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကို ဒကစအဖြစ်....” အပြည့်အစုံသို့
စာရွက်ပေါ်တွင် မောင်သာထူးက မျက်စိ နှစ်လုံး၊ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ် ဆွဲလိုက်သည်။ မောင်မြင့်လွင်က ဘေးအနားသတ် မေးရိုး လိုင်းနှစ်လိုင်း သေသေသပ်သပ် ဆွဲထည့်လိုက်ရာ
ဥပဒေ မချိုးဖောက်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချေပ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းအား စွဲချက်တင်ထားသော တားဆီးကန့်သတ်မိန့် ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် ဥပဒေကိုမျှ ကျူးလွန်
အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ် ၆ သိန်းကျော် ရရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် လက်မှတ်ရေးထိုး လှုပ်ရှားမှု တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှ လက်မှတ်ပေါင်း ၆ သိန်း ၅ သောင်းကျော်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်ရေး တောင်အာဖရိက တောင်းဆို
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံး၌ တရားရင်ဆိုင်နေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဒု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
စစ်အစိုးရ ကန့်ကွက်ချက် ထိုင်းနိုင်ငံ ပယ်ချ
အာဆီယံ အသင်း၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တောင်းဆို ကြေညာခဲ့ခြင်းမှာ မြန်မာ့အရေးကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို တရားရုံးတင် စစ်ဆေးတဲ့ ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ သတင်းထောက်တချို့ နဲ့ သံတမန်တွေ တရားခွင်ကို ၀င်ရောက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်
ကမ္ဘာကြီးက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဖြစ်ရပ်များကို အာရုံစိုက်နေကြပြီး၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ခုံရုံးတင် တရားစွဲဆိုနေသော အမှုနှင့် ဤသို့ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရန် ကမ္ဘာတဝှမ်း လက်မှတ်ရေး ထိုးတောင်းဆို ...
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်သို့ လက်မှတ်ပေါင်း ၆ သိန်းကျော် ပေးပို့မည်
မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း အနေဖြင့် မြန်မာ့အရေးကို အထူးအာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် လက်မှတ်များကို နိုင်ငံပေါင်း...
ဒေါ်စုအား တရားစွဲခြင်းအပေါ် ထိုင်း၏ ရပ်တည်ချက်အား ဥရောပသမဂ္ဂက ထောက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်ကို ထောက်ခံကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂက ကြေညာခဲ့သည်ဟု ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အပြောအရ...
ရှမ်းတပ်များက ခြုံခိုတိုက်မှုကြောင့် စစ်ဘက် အရာရှိ ၂ ဦး သေဆုံး
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) စစ်ကြောင်းတခုက ခြုံခို တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်အစိုးရ တပ်မတော် အရာရှိများ အပါအဝင် လူ ၁၅ ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း ရှမ်းတပ်ဘက်က အပြောအရ...
အယ်ဒီတာခင်ဗျား ... နွားချေးကနေ ဘိုင်အိုဂက်စ်လို့ခေါ်တဲ့ ဇီဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်ပြီး လျှပ်စစ်မီးထွန်းဖို့ကို ရှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်ခရိုင်ထဲမှာ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သန်းထွဋ်က ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒီလ ၁၆...
မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေး ဝင်စွက်ခြင်းမဟုတ် ဟု ထိုင်းက ပြော
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွှတ်ပေးရန် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် တောင်းဆိုခြင်းသည် မြန်မာပြည်တွင်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ၆ ရက်မြောက်နေ့ သတင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားခွင်နှင့် ပတ်သက်၍ အာဆီယံအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ကန့်ကွက်ကာ တုံ့ပြန်လိုက်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရေးယူရခြင်းမှာ...
အာဆီယံ ထုတ်ပြန်ချက်ကို စစ်အစိုးရက ကန့်ကွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားစွဲဆိုခံနေရသည့်အပေါ် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်ပါ စည်းမျဉ်းများကို သွေဖည်ကာ...
မတရား အပြစ်ပေးခြင်း၊ ကလေးများအား ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်း
ခရစ်စတင်း ကောလင်း ဆိုသည့် တကိုယ်ရည်သားသည် မိခင်တဦးသည် သားပျောက်ရသည့်အထဲ လော(စ်)ဇင်းဂျလိ(စ်) ရဲဌာနမှ ရဲမှူး ကပ္ပတိန် ဂျုံးက...
San Francisco bay area Burma democracy forces successfully held 19th Anniversary of 1990 Election
19th Anniversary of 1990 Elections event in San Francisco bay area is going on
Master of ceremony Ko Kyaw Sit Naing
Master of ceremony U Htun Myat Oo and Ko Kyaw Sit Naing
Gathering before the event: from left to right: Rick, Dr. Salai Htun Than, Ko Ko Lay, Daw Saw Myat...
Gathering before the event: from to right: Rick, Dr. Salai Htun Than, Ko Ko Lay, Daw Saw Myat Mar,...
Gathering before the event. from left to right: Moe Kyaw, Dr. Salai Htun Than, Ko Ko Lay, Daw Saw...
Gathering before the event: from left to right: Ko Moe Kyaw, Dr. Salai Htun Than, Ko Ko Lay, Daw...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ၁၁/၀၅/၀၉
File Name: nld.jpg
25-05-2009 NLD(HQ) office မှ ဦးဥာဏ်ဝင်း၏ သတင်းစာလင်းရှင်းပွဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ(Click)
File Name: BB-01.jpg
File Name: BB-02.jpg
File Name: BB-09.jpg
File Name: BB-06.JPG
Posted by saffrontoward at 9:39 PM